“Misy raharaha analan’ny Tompo azy” Marka 11:3
Ny andinin-tSoratra Masina hitantsika eto dia miresaka raharaha na asa. Hojerentsika ary, raharaha inona moa izany? Iza no manao izany raharaha izany ary inona no antony hanaovany izany?
Tamin’ny andron’i Jesosy, dia mbola tsy nisy ny fiarakodia, na ny fitaovana hifamoivoizana hary fomba tahaka ny amin’izao fotoana izao. Ny biby dia nampiasaina be dia be taloha, eny hatramin’izao fotoana izao aza, ho fitaovana hoentina mandeha any amin’izay toerana tiana haleha. Isan’izany fitaovana izany ny soavaly, ny rameva, ny ampondra na ny boriky.
Eto amin’ny Filazantsara araka an’i Marka ary, dia nifidy zana-boriky anankiray ny Tompo mba hanao raharaha, dia tsy hafa fa ny hitondra ny Tompo hiakatra an’i Jerosalema, amin’ny maha-Mpanjaka azy.
Ny zava-boahary rehetra eto ambonin’ny tany, dia efa nataon’Andriamanitra hanana ny anjara raharaha sy andraikiny avy. Miandry an’izany ny tsirairay ka amin’ny fotoana hilàna azy, tahaka ny tamin’ny andron’i Jesosy, dia tokony ho vonona ny amin’izany sy hanaiky izany. Araka ny hitantsika eto, ny asan’ny boriky, dia fitaovana hifamoivoizana. Tamin’ny fotoana tsy nampoiziny akory, dia nitondra ny zanak’Andriamanitra izy. Ry Havana malala, amin’ny asa fivelomanao na ny raharaha fanaonao, aoka ho fantatrao fa angamba hitondra ny Tompo koa hianao amin’ny ora izay tsy ampoizinao akory, raha manaiky hianao hanome izany zana-borikinao izany. Angamba ny fiaranao no mba hiangavian’ny Fiangonana mba hitondra ny mpanao Tafika Masina? Mety ny tranonao hanaovana fivoriam-bavaka, na ny volanao hanaovana trano Fiangonana? Ary indrindra, ny tenanao hanao mpitory Filazantsara, hitondra ny Tompo hitety vazan-tany…
Aoka isika rehetra ho vonona amin’ny fotoana rehetra amin’ny asa na raharaha fanaontsika andavandro mba ho vonona amin’izay ilain’ny Tompo antsika. Tahaka izany, na dia ny mpatsaka aza, hahita an’i Jesosy tampoka eny am-patsakana hiteny aminy hoe: "Omeo Aho hosotroiko" (Jaona 4:7) na amin’ny mpanarato hoe: “Analao hazandrano avy amin’ilay vao azonareo teo” (Jaona 21:10)?
Amin’ny fotoana tsy ampoizintsika, raha vonona isika, io asa fivelomantsika io, dia hahitantsika ny Tompo, satria misy ilàny izany asantsika izany eo amin’ny fampandrosoana ny fanjakany.
Ny zavatra faharoa ho raisintsika dia ny momba ilay nanao ny raharaha eto dia tsy iza fa ny zana-boriky. Ny boriky moa dia ambara fa “soavalin’ny mahantra”. Tsy mba fitaovana haingam-pandeha ny boriky, fa miledaleda fandeha, ary indrindra raha mbola zanany sy mbola tanora ihany koa, dia mainka loza. Mahagaga anefa, fa fitaovana tsizarizary toy izany no nofidian’ny Tompo. Izany no mampiavaka Azy amin’ny mpanjaka hafa eto amin’izao tontolo izao, izay misafidy hiriotra amin’ny soavaly faingam-pandeha miriotra ho amin’ny ady. Raha tsorina ry havana malala, raha nifidy zana-boriky ny Tompo, dia satria mifanaraka tsara amin’ny toerana misy azy izany (ory sy mahantra, tsy tian’ny olon-ko-jerena akory), nifandraika tamin’ny toetrany ihany koa (malemy fanahy, tsy mba miavona am-po).
Ry kristiana Havana, mba manana toe-panahy tahaka ny zana-boriky ve isika? Fa tian’ny Tompo hianao hiaraka aminy, raha anananao izany toetra izany. Ny olona tian’ny Tompo amin’ny asa fivelomana izay ataony dia olona malemy fanahy, tsara fanahy, tsy mampahory ny mpikarama amin’ny karamany, na manao didy jadona. Amin’ny toerana izay misy olona miasa mangina amin’ny filaminana, fanginana, fiantràna sy fanasoavana ny hafa, dia azo antoka fa eo ny Tompo. Ary aoka ho fantatsika, na dia mahantra aza isika, na dia tahakan’ny tsizarizary aza ny asantsika, na ny fitaovana ananantsika dia tsarovy fa “ny fo torotoro sy mangorakoraka, tsy mba ataon’Andriamanitra tsinontsinona”. Mitady olona malemy fanahy tahaka ny zana-boriky ny Tompo hiara-miasa aminy, saingy indrisy, tsy nahita firy izy. Olona masiaka sy lozabe, tsy miantra ary tsy mamela heloka, miady sy tia ady ary miriotra ho amin’izany tahaka ny soavaly, mpanompon’Andriamanitra mifampitory eny amin’ny tribonaly, mangalatra ny volan’ny namany, ny vadin’ny rahalahiny na ny rahavaviny…Fiaraha-monina mifandrirotra sy mifandramatra no hita amin’izao fotoana izao. Ary mampalahelo, fa tsy tafiditra ny Tompo. Maro no tsy manome intsony amin’ny fahatsoram-po ny zana-boriky, tahaka an’ilay tompony. Tsy manome raha tsy misy takalony na tambiny sy tombontsoa izany. Aoka ho fantantsika anefa, fa tsy Jesosy mivantana anie no tonga naka ny zana-boriky fa ny mpianatra e? Nefa hay iraky ny Tompo izy ireny. Mety ho olona tsy fantatrao akory, olona mahantra, sahirana, eny angamba ny fahavalonao aza no tonga any aminao any, mitady ny zana-borikinao, ny volanao na ny nandray anjely izy ireny nefa tsy fantany.
Farany, inona marina moa ilay raharaha nilàna ny zana-boriky? Tsotra ny valiny: hitondra ny Tompo amin’ny maha-Mpanjaka Azy, hiakatra an’i Jerosalema, tanàna masina. Asa lehibe dia lehibe tokoa izany, nifidianan’ny Tompo izany. Ny mahavariana dia izao: ny mahantra sy ny tsy toy inona akory no nofidian’ny Tompo hanao asa mahagaga sy be voninahitra.
Miakatra an’i Jerosalema ny ampondran’ambanivohitra kely, tanavo miakatra an’Iarivo raha ny tena marina, nefa tonga omem-boninahitra miaraka amin’ny Tompo. Mahafinaritra ry havana malala, ny miaraka amin’i Jesosy. Manandratra ny mahantra sy ny mpitondra-tena Izy, fa ny mpiavonavona kosa, hainy ny mampietry azy.
Koa tianao ve ny hasandratr’i Jesosy ny tenanao, ny asanao ary ny momba anao iray manontolo? Maneke androany, amin’izao Alahadin’ny Sampan-drofia izao ho fitaovana eo am-pelatanan’ny Tompo handeha amin’izay hitondràny anao amim-pahaleme-panahy sy amim-pitiavana.
Hanao herinandro masina isika. Manaiky ve hianao hiaraka amin’i Jesosy amin’izany lalana ho any Jerosalema izany? Lalan’ny hazo fijaliana sy ny fietrena izany, nefa lalana be voninahitra hahita ny tanàna masina sy ny voninahitry ny fitsanganana amin’ny maty aoriana kely.
Misy raharaha analan’ny Tompo anao amin’izao herinandro masina izao, ka vonona ve hianao? Misy raharaha analan’ny Tompo antsika amin’ny fananganana ny Fiangonan’Andriamanitra, ka manaiky ve? Misy ilany ny volantsika, ny fiarantsika, ny fahaizantsika, ny momba antsika rehetra, eto amin’ny fanjak’ndriamanitra ka manaiky ve ianao? Anjaranao ny manapa-kevitra fa miandry ny Tompo!